Xilliga dayrta | November 2019
Bacrimin sabiib ah xilliga dayrta waa hawl muhiim ah oo muhiim ah.
Editor Ee Doorashada November 11,2019
Ugu Weyn Ee Xilliga dayrta
Noocyada ugu muhiimsan ee xilliga dayrta
Guga ubaxa xaraashka ah waa geedo digaag ah, magac kale oo loogu talagalay kolhikum. Warshad Tani waa wakiil ka mid ah qoyska dilka ah, nooc ah ubaxyo daaqsinka. Kolhikum ugu badan ee Aasiya (bartamaha iyo galbeedka), Afrika (waqooyi), Yurub, Mediterranean. In ka badan 60 nooc oo ubax ah ayaa hadda la yaqaan oo la sharaxay.
Cagaarka waxtar leh - isbinaajka. Talooyin ku saabsan sida loo kariyo una cuno si habboon
Tilmaamaha loo adeegsado xididka maraale: sharaxaad, halabuurka, qaabka ficilka
Sida loola tacaalo buunshaha budada ah ee dhirta gudaha
Malabka Hawthorn: faa'iidooyinka iyo dhibaatada
Rose "Augustus Louise" (Augusta Luise): sharaxaadda kala duwan iyo xeerarka beerashada
Noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa lagu beeray beeraha khudradda cagaaran Ruush. Aan ahayn waqti dheer ka hor, yaanyada cajiibka ah - beefsteak - noo yimid oo ka yimid galbeedka dibadda, dadka Mareykanka waxay u yaqaanaan hilibka hilibka lo'da ah. Kuwani waa noocyo isku dhafan, oo ku kala duwan cabbirka khatarta ah iyo "caafimaad". Bannaanka Our u soo jiidatay jacayl iyaga oo si deg deg ah loogu talagalay dhadhanka aad u fiican iyo iska caabin ah xaaladaha sii kordhaya ee sii kordhaya. Read More
Fungicide "Healer": dabeecadaha iyo codsiyada
Canab yar oo u adkaysta dhadhan fiican leh - Flamingo Pink
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xilliga dayrta 2019